controlled - Synonyms of controlled | Antonyms of controlled | Definition of controlled | Example of controlled | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for controlled
Top 30 analogous words or synonyms for controlled
ဆစ်ဂနယ်သခြင်း အင်နာလော့ဆစ်ဂနယ်သခြင်းဟူသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆစ်ဂနယ်အဖြစ် မပြောင်းလဲရသေးသော ဆစ်ဂနယ်များကို အသုံးပြုထားသည့် ရှေးဦးအစောပိုင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ရေဒီယို၊ တယ်လီဖုန်း၊ ရေဒါ နှင့် တယ်လီဗွီးရှင်း စနစ်များတွင် အသုံးပြုထားသော ဆစ်ဂနယ်သခြင်း ဖြစ်သည်။ လီနီယာအီလက်ထရွန်းနစ်ပါတ်လမ်း (linear electronic circuit) များ ဖြစ်ကြသော (passive filters)၊ (active filters)၊ (additive mixers)၊ (integrators) နှင့် ဖင့်နှေးလိုင်း(delay lines) များအပြင် (non-linear circuit) များ ဖြစ်ကြသော (compandors)၊ (multiplicators) များဖြစ်ကြသော ( (frequency mixers) နှင့် (voltage-controlled amplifiers)များ၊ (voltage-controlled filters) များ (voltage-controlled oscillators) များနှင့် (phase-locked loops) များသည် အင်နာလော့ဆစ်ဂနယ်သခြင်း ကို အသုံးပြုထားကြသည်။
ဓမ္မပဒ 24. Energetic, alert, ever mindful, pure in deed, careful in action, self-controlled, living in accordance with truth (right livelihood), that person will arise in glory.
ဗွီ-၂ ဒုံးပျံ Some later V-2s used "guide beams", radio signals transmitted from the ground, to keep the missile on course, but the first models usedasimple analog computer that adjusted the azimuth for the rocket, and the flying distance was controlled by the timing of the engine cut-off, ""Brennschluss"", ground controlled byaDoppler system or by different types of on-board integrating accelerometers. The rocket stopped accelerating and soon reached the top of the approximately parabolic flight curve.
တောမီး တောမီးကို တားဆီးခြင်း၊ ထောက်လှမ်းခြင်းနှင့် နှိပ်ကွပ်ခြင်း နည်းဗျူဟာတို့သည် နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း ပြောင်းလဲလာသော်လည်း မဆုံးနိုင်သော ဇာတ်မျောကြီး ဖြစ်လျက် ရှိသည်။ တွေ့ရအများဆုံးနှင့် အကုန်အကျ အသက်သာဆုံး နည်းလမ်း တခုမှာ ထိန်းချုပ်၍ လောင်ကျွမ်းမှု (controlled burning) ဖြစ်ပြီး၊ တောမီး လောင်ကျွမ်းရမည့် အရာပမာဏ နည်းနည်းသာ ရရှိအောင် လျှော့ချပေးခြင်း၊ နည်းနည်းသာ လောင်ကျွမ်းခွင့် ပြုခြင်း ဖြစ်သည်။
ချန်အဲ ၁ လကမ္ဘာလေ့လာရေးယာဉ် The probe was remotely controlled from stations at Qingdao and Kashgar, as the first use of the Chinese Deep Space Network. The ESA Maspalomas Tracking Station was also used to transmit signals to and from the probe.
ပိုင်အိုနီးယား-၁၀ အာကာသယာဉ် At launch, the spacecraft carried of liquid hydrazine monopropellant inadiameter spherical tank. Orientation of the spacecraft was maintained with six 4.5 N, hydrazine thrusters mounted in three pairs. Pair one maintainedaconstant spin-rate of 4.8-rpm, pair two controlled the forward thrust, and pair three controlled the attitude. The attitude pair were used in conical scanning maneuvers to track Earth in its orbit. Orientation information was also provided byastar sensor able to reference Canopus, and two sun sensors.
ချန်အဲ ၁ လကမ္ဘာလေ့လာရေးယာဉ် ၂၀၀၉ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ရက်နေ့တွင် ချန်အဲ ၁ သည် လမျက်နှာပြင်သို့ဝင်တိုက်ပြီး ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ According to the State Administration of Science, Technology and Industry for National Defense (China), this wasaplanned and controlled impact. Impact point was . During its orbital mission the probe transmitted 1,400 gigabits or 175 gigabytes (GB) of data.
ဟေလီယိုစဖီးယား Rather thanacomet-like shape, the heliosphere appears to be bubble-shaped according to data from Cassini's Ion and Neutral Camera (MIMI / INCA). Rather than being dominated by the collisions between the solar wind and the interstellar medium, the INCA (ENA) maps suggest that the interaction is controlled more by particle pressure and magnetic field energy density.
အိုင်းပက် (ကွန်ပျူတာ) အိုင်းပက်များသည် ထိမျက်နှာပြင် ၁၀၂၄ x ၇၆၈ pixel ကို အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းတို့သည် LCD မျက်နှာပြင်အမျိုးအစားများဖြစ်ပြီး၊ အစင်းကြောင်း၊ အစင်းရာ မထင်နိုင်သော မှန်သားမျိုးကိုလည်း အသုံးပြုပါသည်။ iPhone နှင့် iPod များကဲ့သို့ပင် လက်ချောင်းလေးများဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ iPad တွင် နှိပ်နိုင်သော ခလုတ် လေးမျိုး ပါရှိပါသည်။ ၁) အဖွင့်အပိတ်ခလုတ် ၊၂) အသံ အတိုး အကျယ်ခလုတ်၊ ၃) ဖန်မျက်နှာပြင်နားရှိ လေးထောင့်ပုံနှင့် အဝိုင်းခလုတ်၊ ၄) software-controlled ခလုတ်များ ဖြစ်ပါသည်။